Staffan de Mistura oo ku baaqay in la joojiyo duqeymaha - BBC News Somali
Staffan de Mistura oo ku baaqay in la joojiyo duqeymaha
Image caption Burburka Xalab
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobey u qaabilsan dalka Suuriya Staffan de Mistura ayaa ugu baaqay Ruushka iyo dowladda Suuriya in ay joojiyaan duqeymaha ka dhanka ah bariga magaalada Xabal ee uu mucaaradka maamulo.
Ergaygan ayaa sheegay in 255,000 oo qof oo rayid ah loo duqeynayo sababo la xiriira tiro yar oo mintidiin ah, arrintaa oo uu sheegay in asyan marnaba noqon karin marmarsiiyo lagu baabi'iyo magaaladaasi iyo dadkeeduba.
Waxa uu sidoo kale ugu baaqay kooxaha islaamiyiinta in ay ka baxaan magaaladaasi, waxa uuna sheegay in isaha qudhiisa uu sii sagootin doono haddii ay sidaa yeelaan.
Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean-Marc Ayrault ayaa Moscow u jooga wada xaajood uu ku doonayo in Ruushka uu uga dhaadhiciyo in uu ogolaado xabbad joojin ka dhaqan gasha Xalab.
Ayrault ayaa cambaareeyay duqeymaha iyo dagaalada ka socda qaybta bari ee magaaladaasi, waxa uuna ku eedeeyay ciidamada dowladda Suuriya in ay geysteen dambiyo dagaal.